Inqubomgomo Yobumfihlo - WETLANDS OF DISTINCTION
Ikheli lewebhusayithi yethu lithi: https://www.wetlandsofdistinction.org.
Uma ungena ngemvume, sizophinde sihlele amakhukhi amaningana ukulondoloza ulwazi lwakho lokungena ngemvume nokukhetha kokubonisa isikrini sakho. Amakhukhi angena ngemvume izinsuku ezimbili, futhi amakhukhi okukhethwa kukho kwesikrini aphelelwa unyaka. Uma ukhetha "Ngikhumbule", ukungena kwakho kuzoqhubeka namasonto amabili. Uma ungena ku-akhawunti yakho, amakhukhi angena ngemvume azosuswa.